Maitiro ekunyorera inoverengeka: iyo yekuongorora uye yekugadzirisa maitiro | Zvazvino Zvinyorwa
Apo patinotaura nezvazvo kuongorora uye kururamisa Tiri kutaura nezve maitiro akabatanidzwa atinofanira kuita muzvikamu zviviri zvakasiyana: kudzokorora uye kugadzirisa izvo zvatiri kunyora (semuenzaniso kumagumo echitsauko chimwe nechimwe chikamu chekunyora) uye yekupedzisira kudzokorodza nekugadzirisa, kana tangova apedza yekutanga vhezheni ye kutamba.
Ichokwadi che kusasiya basa iri zvachose kwekupedzisira kunogona kuita kuti zvinhu zvive nyore kwatiri. Zvinoitika kuti dzimwe nguva tinofanirwa kutora maonero, uye izvo zvatakanyora nhasi nanhasi tinoda, pamwe nekuti tangoedza nesimba, pamwe nekuti iyo adrenaline yenguvaZvichida mangwana zvichave zvirinani kana kubviswa chaiko. Ndokusaka kudzokororwa uye kugadziridzwa kwezuva rakatevera, kuri mune dzakawanda kesi bvunzo dzechokwadi dzedonje: hauzive kana izvo zvawakanyora zvakanaka kusvikira wazviverenga zvekare mushure mekurara.
Chimwe chinhu chinogona kubatsira zvakanyanya inyaya yekuti shoropodza sezvatinoenda, kureva kuti, verenga chirevo chimwe nechimwe kana ndima imwe neimwe kakawanda usati waenda kune inotevera, nokudaro uchigadzira firita yekutanga inozorerutsa mutoro wekupedzisira wekugadzirisa. Nekudaro, izvi hazvisi zvechokwadi kune ese marudzi evanyori sezvo vazhinji vanorasikirwa nekufemerwa uye vanosarudza kugadzira dutu rekutanga kunyangwe vachiziva kuti gare gare vanozofanira kuripuruzira zvine simba. Munyori wega wega akasiyana uye isu tese tinofanira kutsvaga nzira yedu yekushanda.
Yekupedzisira kuongorora uye kururamisa, zvakakosha kudzikama uye kwete kutorwa nekuchiva. Kune avo vanopedza kunyora novel, nguva haisati yasvika yekuiona ichiburitswa, uye zvakare zvinowanzoitika kuti ivo vanoda uye vanoda kuzorora mairi uye mune dzimwe nguva vanodzika pasi kuti vashande neimwe projekiti iyo yavanotova nayo mupfungwa. Nekudaro, zviri nani kuti usakurirwe nechishuwo uye utore nguva yekuchiongorora, kuchigadzirisa nekuchipfumisa zvakanyanya sezvakakodzera: icho chiratidzo chekuremekedza iro rese basa iro munhu raakapfuura kuti asvike ipapo.
Kana isuwo hatifanire kunge takavakirwa munzvimbo dzekuchengetedza: ndiko kuti, dzimwe nguva tinonzwa kuti chimwe chikamu chinogona kuvandudzwa kana kubviswa, asi isu tine husimbe hwekuita tisina icho. Isu tinofunga kuti izvi zviri kuremekedza basa redu, asi mukati maro hachisi chimwe chinhu kunze kwekuchikanganisa sezvo tichizenge tisiri kupa zvakanakisa zvedu.
Pakupedzisira, usati waedza kutumira, Hazvikuvadze kukumbira rubatsiro rwekunze kuti uwane mamwe ekunze maonero ekuti pamwe anogona kuzadzikisa edu. Kune izvi, isu tinogona kutanga takwevera kune dzimwe shamwari dzine tsika yekuverenga uye vane maitiro atinovimba nawo, tichivakumbira kuti vave vepachokwadi uye vacherechedze zvese kubudirira, kuti vakwanise kuzvisimudzira, uye zvikanganiso, kuti vakwanise kuzvigadzirisa. Tinogona zvakare kuenda kune vanoongorora vanoongorora kuti vagadzirise basa redu tisati tatumira kune vaparidzi. Kana iwe uine rombo rakanaka nekutumirwa uye mumwe wavo achikurudzirwa kushambadzira iro basa, ichaisa nyowani nhevedzano yemafirita iyo inoverengeka inofanira kupfuura, nevanhu vanoverengeka vane basa ravo kuverenga uye kuratidza shanduko kuti dziitwe.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kazhinji vacharatidza shanduko dzatisinga farire zvakanyanya uye dzimwe nguva dzimwe dzatinoona dzichifumisa: hatifanire kuwira mukuzvikudza kwekutsaura nzeve kune zvirevo, asi kana chivi chekushaya hunhu uye kubvisa kana kushandura zvese zvatinokumbira kana izvi zvichipesana nemitemo yedu yekushongedza. Mumwe anofanirwa kunzwa akasununguka nemhedzisiro yekupedzisira iyo siginecha yake inotakura uye nekuremekedza pfungwa yekuti munhu anoda kutora chinhu chakakosha pazvinouya pakuburitswa kwechero bhuku rekunyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Maitiro ekunyorera inoverengeka: iyo yekuverenga uye yekuverenga maitiro